YM-6688 Medical Infrared Thermometer ~ ICT.com.mm
Philips HP 6542/00 Hairdryer And Soft Care SetK138,000
WeGuard UV Sterilization Lamp (LYL-ZWXTD-01)K47,000
YM-6688 Medical Infrared ThermometerK75,000 K63,000-16%
Philips Hair Straightener HP4686/22K138,000
Philips DryCare Essential Hairdryer BHD004/00K73,000
HomePERSONAL CARE & MEDICALYM-6688 Medical Infrared Thermometer
WeGuard UV Sterilization Lamp (LYL-ZWXTD-01)Back to PERSONAL CARE & MEDICALPhilips Hair Straightener HP4686/22
YM-6688 Medical Infrared Thermometer
K75,000 K63,000SAVE K12,000
နဖူးရှေ့မှ အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာ Measurement accuracy: +/- 0.2 C (Body temperature mode) Measuring range: 35 C – 42 C (Body temperature mode) Measuring distance:3~5cm Operating ambient temperature: 10 C... [Learn more]
Brand: UnbrandedFilter by: Click & Collect, personal care, Promotion, Warehouse
နဖူးရှေ့မှ အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာ
Measurement accuracy: +/- 0.2 C (Body temperature mode)
Measuring range: 35 C – 42 C (Body temperature mode)
Measuring distance:3~5cm
Operating ambient temperature: 10 C ~ 40 C
Operating environment humidity: 15%RH~80%RH
Ambient storage temperature:0C ~ 50 C
Relative humidity during storage: <85 %
Product Power: DC 9V (9V +/- 10%) Battery
Automatic shutdown time: 6sProduct Size: 100 x 46 x 160 mm
Product Weight: 125 g (Excluding battery weight)
အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး စွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့ YM-6688 နဖူးရှေ့မှ အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်အပူချိန်ကို Infrared ရောင်ခြည်နဲ့ တိကျစွာ တိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်။ အပူချိန်တိုင်းတာမှုအတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Accuracy ပိုင်းကို အမြင့်မားဆုံး ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားပြီး ကွဲလွဲမှု +/- 0.2 C (Body temperature mode) သာရှိတဲ့အတွက် အပူချိန်မှားယွင်းတိုင်းတာမိမှာကို စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယ်အပူချိန် 35 C မှ 42 C (Body temperature mode) အထိ တိုင်းတာပေးနိုင်ပြီး လူနာနဲ့စက် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့စရာမလိုဘဲ3~5cm အကွာအဝေးကနေ မှန်မှန်ကန်ကန် တိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 10 C ~ 40 C နဲ့ လေထုစိုထိုင်းဆ 15%RH~80%RH အခြေအနေတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရာသီမရွေး အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Power ပိုင်းအတွက် DC 9V (9V +/- 10%) Battery ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုဘဲ ရပ်ထားချိန်6စက္ကန့်အကြာမှာ အလိုအလျောက် စက်ပိတ်ပေးတာကြောင့် ဘတ္ထရီသက်တမ်းကို ပိုမိုကြာရှည်ခံစေပါတယ်။
Small and exquisite portable
Fast temperature measurement in one second
Accuracy is most important for thermometer measurement
I want to order 5000 + 1000 + 13 YM-6688 …
I want to order 5000 + 1000 + 13 YM-6688 medical infrared thermometers non contact. Can you please send meaquote and do you do deliveries please add into the quotation. Based in South Africa, Gauteng, Johannesburg.